I-China Simple Western Style Double Solid Wood Wood Bedroom Ifenisha Ifenisha # 0109 Ukukhiqiza nefektri | Yamazonhome
Isitayela Esilula Sombhede Wendawo Yokulala Igumbi Elilula Elingasentshonalanga # 0109
Igama: Umbhede wezinkuni oqinile
Inombolo imodeli: Amac-01 09
Usayizi: 1850mm * 2055 * 865mm
Yonke imibhede yokhuni oluqinile
Ukukhethwa kwe-oki emhlophe esezingeni eliphakeme kunamandla okuthwala umthwalo namandla okubamba izipikili kunamanye amahlathi. I-oki elilodwa lokucaciswa okufanayo lingasekela izinkuni ezimbili ezijwayelekile. Yenziwe nge-oki futhi ithwala umthwalo osindayo. Inzima futhi inhle, inempilo futhi inobungani bemvelo, ngaphandle kokukhathazeka ngezinkinga zephunga, nomthwalo ozinzile, Ingathwala isisindo samadoda amadala ayi-8.
Ukwakhiwa kwe-backrest okwenziwe ngabantu
I-headboard yenziwe ngokhuni oluqinile, ngokuthungwa okucacile nokuqina okuqinile kombhede. I-engeli yokuklama ilungisiwe ku-arc, futhi ukwakheka okusondelene kwenza kube mnandi ukuncika. Ukuma kwefenisha kufanele kuqhamuke emzimbeni womuntu, uma kuqhathaniswa nezinto eziqondile, Ijika lemvelo eliseduze nomzimba womuntu linobungane ngokwengeziwe. Umklami usebenzisa indlela yokuklama "yesitayela sesigcawu", kusuka ekhoneni lokuncika, ukuphakama kokufinyelela okulula, ukuphakama kombhede wama-30cm, njll., Ukuhlolwa okuphindiwe, kanye nencazelo yenduduzo yangempela.
Isokhethi elinobuvila kuphaneli engemuva
Kukhona ibhodi lesitoreji ngemuva kwekhanda lombhede elenza imisebenzi eminingi, elingasetshenziselwa ukubeka izincwadi, izinkomishi zamanzi, njll. umbhede. Ukucubungula indilinga yomhlahlandlela ophindwe kabili embhedeni wombhede, kuhlanganiswe nobuhle obulula, kuvulekile umhlaba ufihliwe ngaphakathi.
Umzimba wombhede oqinile wezinkuni usebenzisa amathambo emigqa eqinile yokhuni, ahlelwe ngokuxinana ngokusatshalaliswa kwabantu abaningi, amandla wokuthwala aqinile namandla afanayo, isakhiwo esizinzile, akulula ukuwa. Esikwakhile ngumbhede wokuphefumula, amathambo aqukethe ama-oki slats, nomoya ophefumula umoya, wehlisa ukuqongelela umswakama, uvuselele futhi ulale kahle ubusuku bonke.
Isitimela sezingubo esilinganayo
Unyawo lombhede lungafakwa ngokukhululekile ngenduku yonyawo, engabekwa ezingutsheni zomuntu siqu, izikhafu, njll., Elula futhi esebenzayo. Izitayela ezimbili ezifanayo zizokudalela impilo ehlukile yasekhaya.
Imilenze yombhede oqinile oyindilinga okhuni
Yonke imibhede eqinile yokhuni, akukho nqubo yokuhlinza, akukho ipulangwe lezinkuni ezixubile, unyawo oluqinile lombhede oluqinile, i-engeli eqondile yokutsheka, ukuthwala umthwalo ozinzile, okukunikeza umuzwa ophelele wokuvikeleka. 17cm off emhlabathini, phansi akuthinti design phansi, elula Hlanza wena uhlanze futhi banakekele isikhala phansi.
Umbhede wesimanje olula oqinile wezinkuni
Noma ngabe "Angikwazi" ukuhlanganyela nezinkinga empilweni yakho
"Mina" ngedwa ngingakusa ekhaya
Ukubeka okukhishwe umbala wokhuni wokuqala
Idizayini eyi-103 degree ergonomic yekhanda lombhede
Yehlisa ukukhathala kosuku olulodwa
Langaphambilini I-Oak Wardrobe Silent Damping Slide Rail Sliding Door Wardrobe Igumbi lokulala Ifenisha # 0108
Olandelayo: I-Unitarp Inflatable Inflatable Yoga Mat Abadala Ababhukuda Iphuli Lamanzi we-Yoga Mats Nge-Eva Non-Slip Pad 0389
Multi-Functional Usofa Single Igumbi Ifenisha ...
Ifenisha elula yokhuni oluqinile yegumbi lokudlela iSid ...
Ngokhuni Deluxe Villa Cat House nge Umpheme kanye Ba ...